"नोकिया 3110" सेल फोन। "नोकिया" (नोकिया 3110 क्लासिक): निर्दिष्टीकरण, डिजाइन
त्यहाँ सबै समय मा मांग गर्दै छन् बजार मा फोन हो। एक पटक, र वर्ष पछि बजार मा आएको यो ग्याजेटहरू खरीदारों लोकप्रिय रहने। कहिलेकाहीं यी मोडेल राम्रो तरिकामा सम्झना र यसको बिक्री को दिन मा popolzovavshis डाटा devaysom थियो गर्नेहरूलाई, अहिले प्राविधिक ग्याजेट एक फरक संस्करणमा उत्प्रेरित छ।
यस फोन भाषण बारेमा हामीले आज छन्। भेट्नुहोस्, यदि पहिले सुनेका छैन - 3110. "नोकिया", उत्पादन विकासकर्ता को दुनिया मा एक प्रसिद्ध मोडेल, "हत्या गर्न" आफ्नो तरिका को एक अद्वितीय सिर्जना गर्न व्यवस्थित भएको छ, र यसरी लामो समय को लागि सम्झना गरिने आधारभूत कार्यात्मक फोन छ। अब यो अवश्य, उत्पादन छ छैन, तर समयमा यो एक धेरै लोकप्रिय ग्याजेट थियो।
यो कठिन यो एक मोडेल 3110 "नोकिया" बजार मा कस्तो थियो अनुमान छ। यो यन्त्र प्रयोग गर्न साँच्चै सजिलो छ। यो संग, तपाईं केही आदिम तस्वीर गर्छन, कल, एक मेमोरी कार्ड मा फाइलहरू भण्डारण गर्न सक्नुहुन्छ, ब्लुटुथ वायरलेस-इन्टरफेस प्रयोग गरेर स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ।
यन्त्र, unpretentious हुँदा, एक लामो समय को लागि सञ्चालन केही दिन को लागि शुल्क राखन सक्षम।
यो सबै भन्नुभयो उपकरण संग काम गरिरहेको र विश्वसनीय फोन रूपमा अवस्थित छ। यसलाई पुष्टि भने आफ्नो उपस्थिति र शैली उपकरण (हामी यस पछि छलफल गर्नेछौं)।
निस्सन्देह, आज यसको मोडेल 3110 "नोकिया" बिक्री छैन। यो देखि, अन्य मान र प्राथमिकताहरू को बजार मा समय र अनुभव देखाएको आवश्यक छैन। मान्छे उच्च आवृत्ति प्रोसेसर मा चलिरहेको, रंगीन, संतृप्त रंग प्रदर्शन र क्यामेरा संग, अधिक शक्तिशाली स्मार्टफोन प्रयोग गर्नुहोस्। यो सबै उपकरण संचार लागि सिर्फ एक माध्यम, तर विश्वव्यापी प्रोफाइल को एक वास्तविक मल्टिमिडिया केन्द्र हो बनाउँछ।
फोन "नोकिया 3110" पहिलो पटक बिक्री को लागि प्रस्तुत हुँदा सायद, त्यो पनि ती ग्याजेटहरू आज हामी देख्न कि एक को लागि गलत हुन सक्छ। आखिर, त्यो पनि उन्नत सुविधाहरू एक नम्बर, माथि वर्णन रूपमा भएको थियो। यो सबै भन्दा राम्रो मूल्य अन्य थप सरल उपकरणहरू तुलनामा थियो स्पष्ट छ, र मानिसहरूले यसलाई भुक्तानी गर्न इच्छुक छन्।
फोन मूल्य 2007 आज रूपमा भन्न गाह्रो छ, तर मोडेल प्रिमियम वर्ग पर्छ - एक वास्तवमा। त्यतिबेला स्मृति कार्ड को लागि एक rarity समर्थन थियो, क्यामेरा यस्तो म्याट्रिक्स संग शायद भेट्छन् एक USB-पोर्ट र माथि उल्लिखित ब्लुटुथ रूपमा संचार क्षमताहरु। आज, को पाठ्यक्रम, मोडेल एक पूर्ण बिभिन्न वर्ग छ, त्यसैले उपकरण आधिकारिक बिक्री छैन किनभने तपाईं यसलाई खरीद गर्न चाहनुहुन्छ भने, निजी विज्ञापन बीचमा हेर्न, हुनेछ। बस औसतमा भन्न, "नोकिया 3110" मूल्य पुग्छ $ 5-10। बिक्री को समयमा यो धेरै उच्च थियो।
उपकरणको undoubted फाइदा यसको उपस्थिति र शैली रूपमा छलफल गर्न सकिन्छ। हामी पहिले देखि नै यो कुरा गर्न शुरू गरेको छ, तर पनि फ्रेम मोडेल 3110 रूपमा केही स्पष्ट गर्न चाहन्छ।
"नोकिया", यो भने हुनुपर्छ, पहिले नै यो फोन को रिलीज को समयमा यस्तो उपकरणहरू को निर्माण मा अनुभव थियो। यस्तो उपकरणहरू सबै क्रोध थिए भने, र फिनिस निर्माता मात्र आधारमा लिया सामान्यतः बुझे अवधारणा।
एक शरीर मोडेल देखि बनेको छ जो tanned कुनै न कुनै प्लास्टिक, पनि छैन संयोगले स्पष्ट चुनिएको थियो - यो केवल उपकरणको समग्र अवधारणा underlines। स्क्रिन र माथिल्लो गतिशीलता को प्रक्षेपण आकार वरिपरि गोलो बटन - यो सबै पहिले नै अन्य Nokia उपकरणहरूमा प्रयोग गरिएको छ, त्यसैले डिजाइन मोडेल ब्रान्ड सकिन्छ। कम से कम आफ्नो जागरूकता उच्च पर्याप्त सहित छ - र तिनीहरूले (2007 को रूप मा, को पाठ्यक्रम) नयाँ "नोकिया 3110" थियो।
अलग, तपाईं फोन फरक छ जो व्यावहारिकता, याद गर्न सक्नुहुन्छ। सबै को पहिलो यसलाई उच्च गुणवत्ता विधानसभा, कुनै पनि backlash, खरोंच र vacillation समाप्त जो आकर्षित गर्छ। यो तपाईं मोडेल को सुरक्षा चिन्ता छैन भन्ने हो। साथै, तपाईंले उपस्थिति, मामला "नोकिया 3110" बाट अनुमान गर्न सक्छ रूपमा फल्स र धक्का सुरक्षित छ। जबकि फोन को भित्री भाग कायम राख्न पहिले नै, कुनै पनि शक्ति परीक्षण स्थानान्तरणका सक्षम प्लास्टिक माथि उल्लेख गरे।
को 3110 मोडेल जस्तै उपकरणहरूमा, एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदर्शन द्वारा प्ले। पनि त, यो उपकरणहरू जानकारी प्रदर्शन गर्न सेवा एक उज्ज्वल र रंगीन र थप सरल प्रदर्शन रूपमा हुन सक्छ कि स्पष्ट (निर्माण कीबोर्ड फोन अर्थ) थियो।
निस्सन्देह, जबकि फोनको स्क्रिन आधुनिक स्मार्टफोन आज भन्दा एक कम भूमिका थियो। एक लघु प्रदर्शन उपकरण, त्यसपछि सबै मोडेल यस्तो ढाँचामा गरियो किनभने उहाँले नजिक थियो विश्वास थियो जो फोन, धेरै फरक छैन।
हामी "नोकिया 3110" (क्लासिक संस्करण) बारे मा कुरा गर्दै भने, त्यसपछि यो स्क्रिन सेट, चित्र आकार छ - 128 X 160 पिक्सेल। आजको स्तरअनुसार, यो एक हास्यास्पद तर्क, 3110 को मामला मा छ हुनत यो बारेमा 262 हजार रंग, छ जो धेरै समय मा धेरै शीर्ष सुविधाहरू फोनबाट विभिन्न प्रसारित गर्न सक्षम छ। यो TFT प्रविधि (, प्रसंगवश, यो दिन केही बजेट ग्याजेटहरू लागू जो) मा बनाइएको थियो।
मोडेल को, र विशेष गरी आधुनिक फोन अघि लाभ को एक आफ्नो स्वतन्त्रता छ। शुल्क प्रवाह "नोकिया 3110" (ब्याट्री र यसको मात्रा खातामा लिइरहेको छैन) एक ठूलो स्क्रीन र शक्तिशाली प्रोसेसर संग स्मार्टफोन भन्दा धेरै कम छ किनभने यो, अचम्मको छैन। हामी यो मामला मा वर्णन जो फोन, यो चिनियाँ स्मार्टफोन को कामकाज लागि आवश्यक हुनेछ के को केवल एक अंश खपत।
तसर्थ, 3110 मा स्वतन्त्रता सँग सम्बन्धित अवसर धेरै फराकिलो छ। 1020 mAh ब्याट्री संग फोन स्ट्यान्डबाइ मोडमा 370 घण्टा काम गर्न सक्छन्। हामी विचार हामी फेरि यस उपकरण केही दिन (छैन घण्टा) को लागि चार्ज गर्न आदेश पर्याप्त छ कि दर्शाउन गर्नुपर्छ।
अचम्मको कुरा, विकासकर्तालाई पहिले नै मिडिया समायोजित गर्न स्मृति इच्छित रकम प्रदान गर्न आवश्यकता बारे सोच सुरु गरेका छन्। प्रयोगकर्ता आफ्नो निपटान मा आन्तरिक मेमोरी लगभग 40 मेगाबाइट छ। यो "नरम" फाइलहरू धेरै दसौं गर्न पर्याप्त सानो रकम भएकाहरूलाई द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने मूल न्यूनतम छ।
तिनीहरूलाई microSD स्मृति कार्ड लागि समर्थन प्रदान लागि, एमपी3प्लेयर रूपमा फोन प्रयोग गर्ने थप सक्रिय प्रयोगकर्ताहरूको लागि रूपमा।
1 वा2जीबी कार्ड जडान गरेर, तपाईं साँच्चै डाटा स्थानान्तरणका लागि एक माध्यम रूपमा टेलिफोन प्रयोग गर्न सक्छ। एउटै तरिकामा, सायद, प्रसारित र आफ्नो उपकरणबाट सम्पर्क हुन सकेन।
माथि उल्लेख रूप मा, मोडेल संचार वर्ण को एक किसिम प्रदान गर्दछ। त्यहाँ2सिम कार्ड को लागि कुनै समर्थन छ, तर ग्याजेट ब्लुटुथ, को सामाग्री-जडान लागि समर्थन साथै छ मानौं एउटा इन्फ्रारेड पोर्ट (जो सबै nostalgic)। यो उपकरण रिलीज को समय मा त्यो कुराकानी गर्न निःशुल्क छ भन्ने हो, यो ठूलो उपलब्धि थियो। निस्सन्देह, एक पीसी जडान लागि, र युएसबी-इन्टरफेस प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ डेटा को ठूलो मात्रा प्रसारित गर्न आवश्यकता को मामला मा विशेष व्यावहारिक छ।
म अझै पनि र भिडियो क्यामेरा को संभावना चिनारी गर्न चाहनुहुन्छ अन्तिम बिन्दु हाम्रो द्वारा वर्णन मोडेल मा माउन्ट। गम्भीर कुरा मा म्याट्रिक्स 1.3 मेगापिक्सेल गणना को एक संकल्प मा, को पाठ्यक्रम, यो आवश्यक छ। प्रयोगकर्ता, 1280 x 1024 पिक्सेल को तस्वीर लिन सक्छ रंग प्रजनन हुँदा, को पाठ्यक्रम, धेरै प्रभावित। भिडियो सापेक्षित हामी (प्रति सेकेन्ड 15 फ्रेम मा) 176 X 144 पिक्सेल को एक संकल्प पुग्नुभएको छ भनेर भन्न सकिन्छ।
अन्य कुराहरु, उपलब्ध 8x जूम जो मार्फत एक शूटिंग लागि जुम सकेन। साँचो, आफ्नो कामको गुणस्तर, पनि, शायद राम्रो भन्न सकिन्छ - उहाँले एकदम मात्र यो धमिलो बनाउने, छवि impairs थियो।
त्यहाँ अब बारेमा 3110 मोडेल प्रतिक्रिया को एक ठूलो रकम छ भन्ने तथ्यलाई केही आश्चर्यजनक छ। ती सबै मानिसहरू यसलाई प्रयोग गर्न मौका जो द्वारा छोडेर।
उल्लेखनीय, फोन एक धेरै उच्च अनुमान (ठोस चार) छ। प्रायजसो, प्रयोगकर्ताहरूले (काम र संचार को लागि, संचार बताइरहेका) सबै आवश्यक छ कि एक उपकरणको रूपमा यसलाई बुझाउँछ। मोडेल यसको पहुँच, सुन्दर र उच्चतम स्तर मा नै समय सरल डिजाइन, उच्च गुणस्तरीय विधानसभा र समारोह मा प्रशंसा गरिएको छ। धेरै तिनीहरूले केही वर्ष को लागि फोन संग काम गर्दै छन् भनेर भन्न, र सबै यो समयमा मिसिन पनि एक पटक असफल भएन।
सकारात्मक 3110. उदाहरणका लागि अन्य क्षणमा चिनारी, कसैले यसलाई धेरै संकुचित र सजिलो सम्हाल्न कल, यन्त्र को आयाम प्रशंसा। त्यहाँ एक लामो चार्ज समय खुसी छन् जो प्रयोगकर्ता छन् - ब्याट्री जमीन (स्मार्टफोन) मा बस्छन भने, तपाईं एक सानो संग फोन रूपमा यन्त्र ह्यान्डल गर्न अनुमति दिन्छ।
यस्तो समीक्षा - यन्त्र, यसको विश्वसनीयता र स्थिरता गुणस्तर को सबै भन्दा राम्रो सूचक। तपाईं फोन यस्तो किन्न अवसर पाउनेछन् भने, किन्न स्वतन्त्र महसुस!
फ्लाई IQ4403 शक्ति3- समीक्षा। स्मार्टफोन फ्लाई IQ4403 शक्ति 3
स्मार्टफोन ZTE ब्लेड L2: ग्राहक समीक्षा र सुविधाहरू
पहिलो आईफोन: स्मार्टफोन, भविष्यमा परिवर्तन
"Lyumii" को रूपमा कल मा संगीत राख्नु? Nokia Lumia स्मार्टफोन: निर्देशन
स्मार्टफोन सैमसंग ग्यालेक्सी ग्रान्ड Duos GT-I9082: विनिर्देशों, वर्णन र समीक्षा
दिमित्री Mezentsev: जीवनी, क्रियाकलाप, उपलब्धिहरू
पत्थर सिंह-महिला - यो उनको भाग्य थियो!
गुगल धेरै तरिकामा खाताबाट कसरी फोन unbind गर्न
Kuznetsk कोइला बेसिन
Degtyarev हतियार कारखाना
विमान एमएस-21 - रूसी विमान उद्योग को गर्व
Smetannikov "क्लासिक" - सबैभन्दा स्वादिष्ट र नाजुक केक!
पोलेको पागल - धेरै को लागि एक मनपर्ने व्यवहार गर्नुहोस्। घर क्यान्डी र केक "Grilyazh" मा खाना पकाउन कसरी?
के सजाय कला समावेश छ। 116 घन्टा। 1 आपराधिक कोड को?
ग्रेड 11 मा परिदृश्य PROM: मजा दृश्य उदाहरण।